အင်မတန်စောက်ကျင့်ယုတ်ပြီး ညစ်စုတ်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးထဲတော့ ဘယ်တော့မှ မဝင်လေနဲ. | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဆန္ဒပြပွဲတွေ မဟုတ်ရင် ဒီနိုင်ငံက ပြည်သူ ဘာလုပ်ကြရမှာလဲ …?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ အဲဒီလောက်ကို ကြောက်နေရင် နိုင်ငံရေးကနေ အနားယူသင့်ပြီ »
အင်မတန်စောက်ကျင့်ယုတ်ပြီး ညစ်စုတ်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးထဲတော့ ဘယ်တော့မှ မဝင်လေနဲ.
တပ်ထဲစဝင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းသွားတာဘဲပေါ့၊ ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။ ကျေးဇူးရှင်လို.ပြောလို.ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တင့်ဆွေရဲ.ထောက်ခံမှုနဲ.ဘဲ အဖေကြီး(ဗိုလ်နေဝင်း)ရဲ. ထီးတော်မိုး၊ ဖိနပ်တော်စီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူ.ပါတီညီလာခံဆိုရင်လည်း နောက်ကနေလိုက်ပြီး အရပ်ဝတ်နဲ.လုံခြုံရေးယူပေးရတာဘဲလေ၊ ဟိုတစ်လောကတောင် လူမှုကွန်ယက်မှာတိုက်ပုံအပြာနုလေးနဲ.ကျုပ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတောင် တွေ.လိုက်ပါသေးတယ်။
ဘုန်းမီးနေလတောက်ပခဲ့တာကတော့ ၁၉၈၃ အောက်တိုဘာလ အာဇာနည်ကုန်းဗုံးကွဲမှုနောက်မှာပါဘဲ။ အဲဒီအချိန်ကထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟာ ဗုံးကွဲချိန်မှာဂေါက်ကလပ်သွားပြီး အရက်သောက် ဂေါက်ရိုက်နေလေရဲ.။ မြောက်ကိုးရီးယားကွန်မန်ဒိုတွေဟာ အာဇာနည်ဂုံးကိုတောင်ကိုးရီးယားထောက်လှမ်းရေးနဲ. စစ်ဆေးရေးအဖွဲ.တွေလာရောက် စစ်ဆေးပြီးတစ်နာရီမပြည့်ခင်မှာဘဲ ပုံမှားရိုက်ဝင်ရောက်လာပြီး မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာ ဗုံးတွေကိုလာဆင်သွားခဲ့တာပါ။ မျက်နှာကျက်ပေါ်ကနေ အောက်ကိုဖြာပြီးကွဲတဲ့အတွက် ထိတဲ့သူတွေဟာရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်သေကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ. NIB ပူးပေါင်းအဖွဲ.တွေစစ်လိုက်ဆေးလိုက်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်ကြတော့ နောက်ဆုံးပုစွန်တောင်ချောင်းထဲမှာဒိုက်ဖုတ်နဲ. ရေထဲကူးမြောပြီးမြစ်ဝကမြောက်ကိုးရီးယားသင်္ဘောဆီ ပြေးဖို.လုပ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကင်မင်ချူးကိုအရှင်မိတော့တာပါဘဲ။ ဒါကလဲထောက်လှမ်းရေးကကောင်းလွန်းလို.တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ချောင်းထဲငါးထိုင်မျှားနေတဲ့သူတွေ ဝိုင်းဖမ်းကြလို.ပါ။ အဲသလိုနဲ. အဖေကြီးက ‘ဟေ့ ငါတို.ထောက်လှမ်းရေးထဲ အရက်မသောက် ဂေါက်မရိုက်တဲ့ကောင်ကိုတင်ကြမယ်’ ဆိုပြီးတင်ကြလို.အဲဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တာပါဘဲ။
ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ.ကတော့ ၈၈ လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတော့တန်ပြန် အဖျက်အမှောင့်တွေအဓိကလုပ်တာပေါ့လေ။ ကျောင်းသားတွေထဲ၊ ဆန္ဒပြသူတွေထဲ ထောက်လှမ်းရေးဆဲလ်တွေစိမ့်ဝင်ပြန်.နှံ.ပြီး အေးအေးဆေးဆေးဆန္ဒပြနေသူတွေကို ဒေါသထွက်အောင်ဆွပေး၊ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးလာအောင်လမ်းကြောင်းပေး၊ နောက်ကုန်သွယ်ရေးရုံးအပေါ်ကနေလူအုပ်ထဲကိုသေနတ်နဲ.ပစ်သွင်းတာ၊ ဆေးတိုက်ထားတဲ့အသေခံတွေကို ခေါင်းဖြတ်ဖို.လမ်းကြောင်းပေးတာ၊ ဂိုဒေါင်တွေကို စစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီးဖောက်ပြပေးတာ အဲဒါတွေလုပ်ရတာပေါ့လေ။ တစ်ဆက်ထဲဘဲ အာဏာသိမ်းဖို.ကစီစဉ်ပြီးသား၊ အဲဒီဗိုလ်စောမောင်ဆိုတာ လူအုပ်ကိုမပစ်ရဲလို.အတင်းကိုဖိအားပေးခဲ့ရတာကလား၊ နောက်ဆုံးတော့သူလဲအရက်တွေဖိသောက်ပြီး ပစ်မိန်.ပေးခဲ့ရတာဘဲလေ။ အဖျက်အမှောင့်တွေထည့်ပေးလိုက်တော့ ဆူဆူပူပူလုပ်သူတွေဆိုပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုအသရေဖျက်လို.ရတာပေါ့၊ နို.မို.ဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲ။ ကျုပ်တို.အားလုံးသေကုန်မှာပေါ့။ အဲဒီတုန်းကဗိုလ်စိန်လွင်ကတော့ လူသတ်သမားပီပီပြတ်တယ်၊ ‘ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို.လူတစ်သောင်းထက်ပိုမသတ်ရဘူး၊ ဒီအရေးအခင်းငြိမ်သွားလိမ့်မယ်’ လို.ပြောခဲ့သေးတယ်။ အာဏာသိမ်းရင် တောခိုမယ့်ကျောင်းသားတွေရှိနေတာကို ကျောင်းသားတွေထဲထည့်ထားတဲ့ဆဲလ်တွေကနေ သတင်းတွေကလည်းတက်နေပြီဆိုတော့ ရုပ်သိပ်မရင့်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးဆဲလ်တွေကို ကြိုပြီးနယ်စပ်တွေဆီကြိုတင်ပြီး ပို.ထားပြီးသားပေါ့လေ၊ ကျောင်းသားတွေနဲ.တွေ.တဲ့အခါ သူတို.ကကြိုတင်ရောက်နှင့်နေတာမို. ဝင်လုံးရတာပိုလွယ်သွားတာပေါ့၊ ဒါနဲ.ဘဲ မိဘရပ်ထံပြန်ကြမယ့်ကျောင်းသားတွေဆိုပြီး ABSDF အင်အားတွေကိုဖဲ့ထုတ် ဖြိုခွဲပစ်ခဲ့တာပါဘဲ။ မြို.ပေါ်မှာမြက်ခင်းသစ်ဆိုပြီးထောင်ပေး၊ သူတို.အမာခံတွေကို အခွင့်အရေးတွေပေး၊ ရန်ကုန်မြို.ထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေးစုရပ်တွေအဖြစ် အသုံးပြုလို.ရမယ့်နေရာတွေမှာစားသောက်ဆိုင်တွေ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးထားတာပေါ့လေ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းထဲက သုံးရာသီဆို သာမန်ပြည်သူတွေတောင်သိတယ်။ ဒါကတော့ Open Secret သဘောမျိုးနဲ.လွှတ်ထားရတာပေါ့။ မိဘရပ်ထံပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို သေသေချာချာကြိုပြလိုက်တော့ မိဘတွေလည်းကျေနပ်ကြတာပေါ့၊ ပြီးတော့မှအလားအလာရှိတဲ့သူတွေကို သေသေချာချာစံနစ်တကျဖမ်းတာ စစ်တာတွေလုပ် ထောင်ထဲထည့် ဆေးထိုးသတ် အဲဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ ရန်ကုန်တင်မဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ.အဲဒါမျိုး နှစ်နဲ.ချီပြီးစစ်ဆင်ရေးပုံစံလုပ်လိုက်တာ ငြိမ်ဆင်းသွားတာပေါ့၊ အသေအပျောက်တွေကတော့ရှိတာပေါ့လေ၊ အရွယ်ကောင်းတွေသေကြတာပေါ့၊ သူတို.မိဘတွေကိုလည်း ဖိအားအမျိုးမျိုးပေးပြီးအလုပ်တွေကထုတ်ပစ်တာပေါ့၊ ဒေါက်တိုင်မှန်သမျှရိုက်လဲပစ်တဲ့သဘောပါဘဲ။ အာဏာကိုခြိမ်းခြောက်လာနိုင်မယ့် အတွင်းစည်း အပြင်စည်းတွေသတ်မှတ်ပြီး သေသေချာချာရှင်းထုတ်ဖယ်ရှားပစ်တာပေါ့လေ။ အရေးအခင်းနဲ. အဲဒီစစ်ကြောရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ သေတဲ့သူတွေသောင်းဂဏန်းရှိမှာပါ။ ဗိုလ်စိန်လွင်ဟာ တကယ်အမြော်အမြင်ကြီးပါတယ်၊ သူပြောတဲ့ဂဏန်းလောက်သေပြီးတဲ့အခါမှာ တိုင်းပြည်ဟာအတော့ကိုငြိမ်ဆင်းသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးလူထုစိတ်ကိုအာရုံပြောင်းဖို. Burma, Burmese, Berman စတာတွေကို Myanmar လို.ပြောင်း၊ အဲဒါကလည်း ဂဏန်းဗေဒင်ကိုသေသေချာချာတွက်ပြီး လုပ်လိုက်တာပါ၊ အဖေကြီးကအဲဒါကိုယုံတယ်လေ၊ ဦးမြိုင်လည်းရှိနေသေးတယ်၊ ဝေဒအဖွဲ.က၊ ဦးမြိုင်နဲ.ကျုပ်ဆရာဗိုလ်တင်ဦးတို.ဆိုတာ ငယ်ပေါင်းတွေ၊ ဗိုလ်စိန်လွင်နဲ.လည်းအတော့ကိုရင်းနှီးတာပါ၊ တစ်ခါက ဗိုလ်စိန်လွင်ကသူ.အိမ်ကခွေးကလေးမွေးတာကို ဇာတာကောက်ဖွဲ.ပြီး ‘မောင်မြိုင်မင်းဟောစမ်းပါ’ ဆိုပြီး ပို.ဖူးသေးတယ်၊ ဦးမြိုင်ကလည်းမခေဘူးဗျာ့၊ ‘ငါ့ကိုလူဇာတာမဟုတ်တာတွေ လာမပို.နဲ.’ ဆိုပြီးတောင်တုန်.ပြန်လိုက်သေးတယ်။ ထားပါတော့။ ရပ်ကွက်တိုင်းကို သန်.ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလိုက်၊ ထုံးသုတ်ခိုင်းလိုက်၊ ဧည့်စာရင်းစစ်လိုက် အဲဒါမျိုးတွေမရိုးအောင် ခိုင်းတာပေါ့လေ၊ အရေးအခင်းတုန်းကရဲရဲတောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မြို.နယ်တွေ၊ အရပ်သားတွေကိုသေသေချာချာအကွက်ချပြီးအမှည့်ခြွေခြွေ၊ စစ်တပ်ကအမာခံတွေထိုးထည့်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးတွေ မြို.နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေထဲကို တပ်ထွက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေခန်.ထား၊ ခရိုင်ဆိုပြီးသေသေချာချာပြန်ဖွဲ.၊ စစ်ဒေသမှူးတွေနဲ.တွဲထားပြီး သတင်းမှန်သမျှတက်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ လှေပွဲတို. မြင်းပွဲတို. အားကစားပွဲတို.လုပ်၊ မြန်မာ့အသံကနေအဆက်မပြတ်ဝါဒဖြန်.၊ မြန်မာ့အသံလောက်နဲ. မရနိုင်တော့ မြဝတီကိုထောင်၊ လူထုကို တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ. မြောနေအောင်လုပ် အဲဒါတွေဆက်တိုက်လုပ်ရတာပါဘဲ။
ဒီလိုနဲ.ဘဲထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်ကြီးကကြီးလာတော့တာပေါ့၊ အာဏာကိုခြိမ်းခြောက်မယ့်ကိစ္စကလွဲလို. အကုန်လုပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းကတပ်အချင်းချင်း ထောက်လှမ်းရေးကိုမုန်းဖို.ဖြစ်လာတာပါဘဲ၊ ကျုပ်ကလဲသတင်းသာတက် အခြားကိစ္စအတော်များများကိုလျစ်လျူရှုထားလိုက်တော့တယ်။ နေရာတကာတီဗီမှာ ကျုပ်မျက်နှာပါတာကို မှန်တာပြောရရင် အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်၊ ငယ်ငယ်ကမင်းသားဖြစ်ချင်ခဲ့တော့ အခုတီဗီမင်းသားဘဝကိုသာယာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နောက်တက်တိုင်းမှူးတွေဟာ အတော်ကိုဆိုးလာပါတယ်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ.မိသားစုကလည်း ပိုပြီးကဲလာပါတယ်၊ ကျုပ်နဲ.ငြိတာကတော့ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်းကိစ္စပေါ့၊ ကျုပ်သာကိုင်တွယ်ရရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်စိုးဝင်းက မိုက်တိမိုက်ကန်းနဲ. ဟိုဝဲလောင်သားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလျှောက်လုပ်လို. ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတွေဖြစ်လာတာပါ။ ရန်ကုန်စစ်ရုံးချုပ်ပေါ်ကစက်ထဲကို “ဒေဝတို.လွှတ်သွားပြီ” ဆိုတဲ့ဗိုလ်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ပို.တဲ့သတင်းတက်လာတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေဆိုတာ အရုပ်ကြိုးပြတ်ဘဲ။ နောက်တော့လဲကျုပ်ဘဲအားကိုးရတာဘဲမဟုတ်လား၊ ကျုပ်ကလည်းအဲဒီအခါက ကမ္ဘာမှာခေတ်စားနေတဲ့ Road Map ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ.ရောကြိတ်ပြီး ဒီပဲယင်းကို မှိန်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလူတွေကျေးဇူးကန်းတယ်ဗျာ့၊ သူတို.ခိုးချင်တိုင်းခိုးမရတာကို အခြားအကြောင်းပြုပြီး ကျုပ်ကိုဆွဲစေ့ကြတာ၊ ‘ခင်ဗျားအိမ်ပြန်တော့’ လို.ပြောတဲ့ အရက်သမားရဲ.အဲဒီနေ.ကမျက်နှာထားကို ကျုပ်တစ်သက်မမေ့ဘူး။
(မှတ်ချက်။ ။ မင်းတို.ကောင်တွေတပ်ထဲဝင်ချင်ရင်ဝင် ငါမတားဘူး၊ ဒါပေမယ့် အင်မတန်စောက်ကျင့်ယုတ်ပြီး ညစ်စုတ်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးထဲတော့ ဘယ်တော့မှ မဝင်လေနဲ. ဆိုတဲ့ ဖခင်စကားကို အမှတ်ရလျက်။)
This entry was posted on March 4, 2015 at 1:35 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.